Telefishanka Al-jazeera Oo Warbixin Ka Diyaariyay Qaxoontiga Kusoo Qulqulaya Somaliland - Somaliland Post
Home News Telefishanka Al-jazeera Oo Warbixin Ka Diyaariyay Qaxoontiga Kusoo Qulqulaya Somaliland
Telefishanka Al-jazeera Oo Warbixin Ka Diyaariyay Qaxoontiga Kusoo Qulqulaya Somaliland
Sanca, (SLpost)- Dagaalka culus ee u dhexeeya xoogaga isbahaysiga iyo fallaagada shiicada ee Yemen ayaa ku qasbay kumanaan qof in ay cagaha wax ka dayaan oo ay nafta kula cararaan doonyaha u shiraacanaya Geeska Afrika.
Warbixinta Al-jazeera kaga hadashay dadkaasi ka soo qaxaya dagaalada ayaa waxa ay kaga warrantay in ay qaybo ka mid ahi ka soo degeen dekeda Berbera, halkaasi oo ay ka heleen gabood ay kaga badbaadaan weerarada cirka ee Sucuudigu hoggaaminayo.
Maareeyaha Dekedda Berbera Eng. Cali Cumar Maxamed (Xoor-xoor), oo telefishinka Aljzeera warbixinta ku waraystay ayaa isna sheegay in dagaalka ka socda dalka Yemen saamayn ku yeeshay xarakaadka dekedda iyo guud ahaanba Somaliland.
“Dagaalka ka socda Yemen ma aha mid noo fiican annaga, saamayn xun oo dhinaca dhaqaalaha ah ayaanu nagu yeeshay, waxaana hadda joogsaday dhaqdhaqaaqii ganacsi ee ka dhexeeyey Somaliland iyo Yemen. imminka ma dhoofino xoolihii aannu maalin kasta dhoofin jirnay, sidoo kale badeecadihii kala duwanaa ee Yemen ka iman jiray ayaa istaagay, taas oo aannu ku khasaarnay ama ku weynay lacag badan,” ayuu yidhi Maareeyaha dekadda Berbera.
Telefishanku waxa uu xusay in ay dadkani ka mid ahaayeen kumanaan qof oo ka soo cararay Yemen tan iyo markii bishii March ay bilaabmeen dagaaladdu.Haseyeeshee sida ay sheegtay Aljazeera,”Ma jiraan wax ha’yado ah oo kaalmo siiyay si ay u soo dhaweeeyaan, waxaanay badidoodii iska dhex galeen bulshadda.
Axmed Xasan Xaashi oo ka mid ah dadkaasi yimid Berbera ayaa sheegay in ay ku qaadatay laba maalmood ka badan inuu kaga soo gudbo badda oo uu soo gaadho xeebta Somaliland isaga oo faro madhan oo ay ka dhammaatay wixii uu lacag haystay. Dagaalka culus ee fallaagada shiicada iyo isbahaysiga ayaa ka soo eryay caasimada Sanca oo uu ku soo noolaa 12 sanno, halkaasi oo uu ka shaqaysan jiray, balse ay dani ku qasabatay inay isaga iyo shan carruur ah oo uu dhalay nafta la cararaan iyaga oo wax yar ka haleelay dharkii. Waxa ay u ahayd markii labaad ee uu ka baxsado dagaal.
“Sida roobka ayaa bamamku ugu soo dhacayeen meel kasta. Suurto-galna ma ahayn in la sii joogaa,” ayuu yidhi Xaashi oo la hadlayay Al Jazeera. “Waxa aan tegayYemen aniga oo ka cararay dagaalka Soomaaliya. Haddana waxa aan dib ugu soo cararay halkan (Somaliland), sababtuna waa dagaalka Yemen.”
Xaashi iyo xaaskiisa Jamiila Axmed waxa ay isku dayayeen in ay quudiyaan carruurtooda oo ag fadhiday, laakiin ma ay haysan wax aan biyo ahayn.
Carruurtooda oo wax ku baranaysay Yemen oo ag fadhiday ayaa weli ku jiray xaalad argagax leh wixii ay soo mareen awgeed.
Noloshooda oo dhan waxa ay ku soo qaateen Yemen, halkaasi oo keliya ayayna u yaqaanaan hoygoodii.